वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी
विराटनगर । सुनसरीको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा बुधबार तालाबन्दी भएको छ । तीन वर्षदेखि चिकित्सक बढुवा रोकिएको भन्दै तालाबन्दी भएको हो ।
माग सम्बोधन नभएपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको चिकित्सक तथा दन्त चिकित्सा कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले बताए। समाजले नै उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो । ३–३ महिनामा बढुवा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको तर, पछिल्लो समय ६ महिनामा बढुवा गरिँदै आएको चिकित्सा कल्याण समाजले जनाएको छ।
कोरोनाको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरूलाई कोरोना भत्ता अझै उपलब्ध नगराएको भन्दै समाज केही दिन अघिदेखि आन्दोलित रहेको पूर्व महासचिव डा. मधुर बस्नेतले बताए।